Momba anay - Dongguan Allwin Stationery Co., LTD
Dongguan Allwin Stationery Co., LTDdia naorina tamin'ny taona 1999. Any amin'ny Wan Jiang Area ao amin'ny tanànan'i Dongguan, faritanin'i Guangdong no misy azy. Nanangana Allwin Industry (HK) International Limited tamin'ny taona 2009. Ninghai Allwin stationery Co., LTD dia natsangana tamin'ny taona 2010. Ny orinasanay dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana biraon'ny biraon'ny birao, ny vokatra lehibe dia ny fanapahana tsihy, ny fanapahana Rotary, ny volon-taratasy, ny volavolan-taratasy, ny taratasy fastener, mpihaza taratasy, laminera. Fahombiazana avo lenta sy famokarana mora vidy, mahatonga ny kalitaonay ho tsara kalitao ary mifaninana tokoa ny vidiny.
Ny orinasanay dia manana fahaiza-manao famolavolana vokatra vaovao tena tsara manana departemanta R&D manokana. Manome vokatra ho an'ny mpanjifanay izahay. Azontsika atao ny manokatra lasitra vaovao ho an'ny famokarana vokatra vaovao ho an'ny mpanjifa, ary manaraka ny fepetra arahin'ireo orinasa. Tongasoa eto amin'ny fiaraha-miasa OEM. Mpanafika maro izay novolavolain'ny orinasanay no nisoratra anarana momba ny patantam-pirenena.
Marika voasoratra anarana ny orinasanay "Allwin" manana agents maro any amin'ny ankamaroan'ny faritany anatiny sy ny tanàna, nitombo ho marika malaza amin'ny stationery izy io. Manana agents izahay amin'ny faritra sasany any Azia atsimo atsinanana sy Amerika.
Ny kolontsainay orinasa:
Ho lasa orinasa mpamokatra indostrialy vaovao.
Miara-mitombo ny orinasa sy ny mpiasa, mamorona lanja ho an'ny mpanjifa, ary mandray andraikitra ho an'ny fiarahamonina.
Marina sy mahitsy fo, manavao sy mahaliana, tsara fanahy ary feno fankasitrahana.
Fijerena talenta orinasa
Ny lehilahy tsirairay dia manan-talenta amin'ny zony manokana.
Ny famolavolana vokatra farany, ny fahombiazan'ny vidin'ny vokatra avo indrindra, ny serivisy ho an'ny mpanjifa tena manome lanja.